४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०७:३१ PM
अमेरिकी र्यापर कान्येलाई सेलिब्रिटीको प्रश्न : के म तिम्रो उपराष्ट्रपति बन्न सक्छु ?
२ श्रावण २०७७, शुक्रबार १७:२२ मा प्रकाशित
२०७७ श्रावण २ शुक्रबार, एजेन्सी । अमेरिकी संगीतकर्मी तथा सेलिब्रिटी कान्ये वेस्ट राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि सेलिब्रिटीमाझ तरंग पैदा भएको छ ।
उनलाई सेलिब्रिटीहरुले शुभकामना दिने क्रम जारी छ । यस्तैमा सेलिब्रिटी केटलिन जेनरले कान्येलाई कान्येको उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बन्न इच्छा व्यक्त गरेकी छन् । ७० वर्षीया टिभी स्टार केटलिनले कान्येलाई उपराष्ट्रपति बन्ने इच्छा व्यक्त गर्दै आफूले टेक्स म्यासेज गरेको बताएकी छन् । बिहीबार टिएमजी अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले भनेकी छन्, ‘मैले कान्येलाई तिम्रो उपराष्ट्रपति बन्न सक्छु ? भनेर सोधेँ ।’
अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । कान्ये वेस्टले भने जुलाइ ४ मा राष्ट्रपति पदमा उठ्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि नै सेलिब्रिटीहरुले उनलाई शुभकामना दिन थालेका हुन् । कसैले सार्वजनिक रुपमै उनको समर्थनमा रहेको भन्दै मत दिने घोषणा पनि गरे ।
यस्तैमा केटलिनले आफू उनको उपराष्ट्रपति बन्न चाहेको बताएकी हुन् । यद्यपि यसबारे कान्येले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति जोइ बाइडेन मुख्य प्रतिष्पर्धामा हुनेछन् ।